စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကို ဂါရ၀ပြုလို့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦး? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံစာရေးအသင်းက ပြုလုပ်တဲ့ သက်ကြီးစာပေ ပညာရှင်တွေကို ပူဇော်ကန်တော့ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်က မြို့တော်ခန်းမကျင်းပခဲ့ပြီး ဒီအခမ်းအနားရဲ့ ကန်တော့ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ အရင်စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာစာရေးဆရာ တွေကြား၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေကြား၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေအကြား ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်ဟာ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက် ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နယ်ပယ် အသီးသီးက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ဖိနှိပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်အဖြစ်ပါ တာဝန်ပါ ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
“စစ်ရေးနေရာမှာ ထိုင်တယ်၊ ထောက်လှမ်းရေးနေရာမှာ ထိုင်တယ် ၊ဒါကကိစ္စမရှိဘူး။ အခုလို စာရေးဆရာကန်တော့ခံတွေထဲမှာ ထိုင်တာကတော့ ဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူး”လို့ ကန်တော့ခံ စာရေးဆရာတွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်ပါဝင်မှုကို ကဗျာဆရာ ကိုလေး(အင်းဝဂုဏ်ရည်) ပြောပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် အခမ်းအနားပွဲမစခင်ကတည်းက စာရေးဆရာတချို့ ထပြန်သွားတာတွေရှိခဲ့သလို အခမ်းအနားကို မတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကန်တော့ပွဲကို ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ စာမျက်နှာမှာ စာရေးဆရာတွေက ဝေဖန်ရေးသားတာတွေလည်း များပြားခဲ့ပါတယ်။
“ကန်တော့ခံ ပစ္စည်းတွေကို လာမပို့နဲ့၊ မယူဘူးလို့ “ ကဗျာဆရာ ကိုလေး(အင်းဝဂုဏ်ရည်)က ရေးသားခဲ့ပြီး ဆရာ မင်းသုည ကလည်း “ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရော ဆိုသလို သက်ကြီးစာရေးဆရာတွေထဲ တိုင်းဖျက်၊ ပြည်ဖျက်၊ သာသနာဖျက် ကို ရောထည့်ထားတာ ရွံတယ်“ ဆိုပြီ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို ရေးသား ခဲ့ကြတာပါတယ်။ သတင်းစာ ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ မောင်သစ်လွှင် (လူထု) လက်မှတ်ထိုး ရေးသားတဲ့ “ ဒီနှစ် စာရေးဆရာအသင်းက ကန်တော့တဲ့ ပစ္စည်းများ လက်မခံပါ။ “ဆိုတဲ့ စာလည်း လူမှုကွန်ရက် မှ ပြန့်နှံ့ နေပါတယ်။ ဒါအပြင် စာရေးဆရာမ ခင်ငြိမ်းသစ်ကလည်း ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ပြသားတစ်လမ်း သံတစ်လမ်းပါ၊ ရောမချပါနဲ့ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေဘွတ်မှာ ရေးသားထား ပါတယ်။ လင်္ကကာဒီပ ချစ်သူ ဝတ္တုနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုကလည်း “ညီလေး ဆရာမင်းလူ…….ရေ ၊ ကန်တော့ပွဲ…..တဲ့ ပြောစရာစကားလုံးရှာမတွေ့တော့ပါဘူးကွယ် “ ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါ။
ဒီကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းဝင် အချို့လည်း အသင်းက နုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ စာရေးဆရာ မောင်သက်နိုင်နဲ့ နာမည်ကျော် ကဗျာ နဲ့ ဝတ္တုရေးဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ပါဝင်ပြီး ဆရာမောင်စိန်ဝင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရင်းနုတ်ထွက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနားကို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ကတော် ကလည်း ဝေဖန်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘွတ် လူမှု့ကွှန်ရက်မှာ “ ဒီနေ့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဘဝတွေ ပျက်ခဲ့ရတယ်။ မိသားစုဘဝတွေ သူကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်“ လို့ ဆိုပြီးရေးသားထား တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒါအပြင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာမင်းကိုနိုင်ကလည်း “မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ လူသတ်ကောင်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ကန်တော့ခံ ဖြစ်ကြောင်း မကြံ ကြလေနှင့် “ ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွှန် ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက် မှာ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှာ အတွင်းရေးမှူး(၁) တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နေစဉ် လာဘ်စားမှုနဲ့ အရေးယူခံခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၀ မှာ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရတက်လာပြီးနောက်မှာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကနေ လွှတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ပြုလုပ်တဲ့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကို စာရေးဆရာ၊ ဆရာမကြီး အယောက်(၂၅၀)ခန့် တက်ရောက် ကန်တော့ခံခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံ လည်း တက်ရောက်ကန်တော့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ပေါ်တူဂီနှင့်ပွဲတွင် တိုက်စစ်မှူး ဘာလော့တယ်လီ ပါဝင်ရန် မသေချာ၊ ပုံမှန် ဂိုးသွင်းယူနိုင်သည??